Kyle Walker iyo Kevin de Bruyne ayaan qayb ka ahayn ciyaartoyda Manchester City ee kulanka Olympiacos ee tartanka Champions League.
Labadan ciyaartoy ayuu Pep Guardiola go’aamiyey inuu siiyo waqti nasasho maadaama ay yihiin ciyaartoyda ugu waqti-ciyaarista badan, waxaana laga reebay liiska ciyaartoyda safarka u galay waddanka Giriigga.
Pep Guardiola ayaa u yeedhay ciyaartooyo da’yar oo uu kusoo buuxiyey boosaska labadan ciyaartoy, balse waxa kale oo iyaguna usoo noqday oo diyaaradda qabsaday Fernandinho, Aleks Zinchenko iyo Benjamin Mendy.
Manchester City ayaa caawa iska xaadirin doonta wareegga 16ka ee tartanka Champions League haddii ay guul ka keento safarkeeda Giriigga, waxaanay Guardiola arkayaa in safkiisu uu si kastaba usoo gudbi doono wareegga xiga xataa haddii ay ciyaartan libin kasoo gaadhi waayaan. Taas beddelkeeda waxa uu go’aamiyey in ciyaartoydiisa muhiimka ah qaarkood, gaar ahaan De Bruyne iyo Walker uu usii dhigto kulanka Burnley ee usbuuca dambe ee horyaalka Premier League ay isku arki doonaan.
Felix Nmecha, Tommy Dyle iyo Cole Palmier oo kooxda da’yarta ka tirsan ayaa ka mid noqday liiska 23-ka ciyaartoy ee u safray Giriigga, vakse waxa Manchester lagaga tegay Taylor Harwood-Bellis, Adrian Bernabe iyo Liam Delap oo iyaguna yaryarka ka mid ah balse tababarka la qaadanayay kooxda koowaad.
Kaliya waxa dhaawac kaga maqan Manchester City saxeexdooda difaaca ee ay xagaagii lasoo wareegeen ee Nathan Ake.
Liiska 23ka ciyaartoy ee Pep Guardiola soo xushay
Ederson, Steffen, Carson, Cancelo, Stones, Dias, Laporte, Garcia, Mendy, Zinchenko, Rodri, Gundogan, Fernandinho, Bernardo, Doyle, Foden, Nmecha, Palmer, Mahrez, Torres, Sterling, Jesus, Aguero
axadle 6050 posts